Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Torolàlana nohavaozina ho an'ny visa Thai na hiditra Thailand
Manohy ny fitondrana tsy misy visa ho an'ny mpizahatany rosiana i Thailand
Ny vanim-potoana quarantine mihena ao anatin'ny 10 andro dia misy fiatraikany amin'ny fanjakan'i Thailand.
Ireo mpitsangatsangana izay nahavita ny vaksinin'ny vaksiny nankatoavina tsy latsaky ny 14 andro alohan'ny fiainganana ary mitazona ny taratasy fanamarinana ny vaksiny dia takiana amin'ny fizahana karantina 7 andro ary homena COVID-19 PCR andrana mandritra ny quarantine
Vaksinina ankatoavina ao Thailand no Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Covidshield (Serum Institute of India), Johnson & Johnson, Sinova, Moderna
Nanamafy ny manampahefana misahana ny fahasalamana sy ny fifindra-monina Thai fa ireo izay mbola tsy nahazo ny vaksinina na nahazo vaksinina hafa tsy voatanisa etsy ambony toa ny Sinopharm sy Sputnik V dia tsy maintsy mandalo programa quarantine 10 andro ary homena COVID-19 PCR andrana mandritra ny quarantine.
Ny taratasy fanamarinana vaksinina voalohany na taratasy fanamarinana vaksiny an-tserasera ihany no tsy maintsy aseho amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Suvarnabhumi any Bangkok rehefa tonga.
Antontan-taratasy ilaina hidirana amin'ny fanjakan'ny Thailand
Ny taratasy fanamarinana fahasalamana Fit-to-Fly / Fit-to-Travel dia tsy ilaina intsony, nefa mbola ilaina ny fitsaharana PCR, miaraka amin'ny 72 ora alohan'ny fisoratana anarana ao amin'ny kaontera fiaramanidina.
Ny taratasy fanamarinana fidirana (COE) dia eo ihany koa amin'ny fisavana ao amin'ny kaontera fiaramanidina ary azo ampiharina amin'ny https://coethailand.mfa.go.th/ 5-7 andro alohan'ny fiaingany.
Ny mpitsangatsangana rehetra izay nahavita ny vaksiny dia entanina hameno amin'ny antsipiriany ny momba ilay vaksiny mandritra ny fandefasana ny COE raha mila fampahalalana momba ny Masoivoho.
Dingana 3 drafitra fanarenana COVID-19 fizahana indray ny fitsangatsanganana any Thailand